Saamaynta isbaddelka Sudan uu ku yeelan karo Soomaaliya - BBC News Somali
Image caption Dibadbaxyada ka socda dalka Sudan
Image caption Madaxweyne Al bashir ayaa dalka Sudan soo xukumayey tan iyo 1989
"Soomaaliya waa dal hadda Soo koraya oo kasoo kabanaya dagaalladii iyo burburkii dawladnimadii, wixii ka dambeeyey 1991 dawladda Soomaaliya waxay u baahnayd in la garab istaago, runtii xogo muhiim ah ayay kala qaadan jireen labada dal" ayuu yidhi Cabdicasiis Nuur caabbi oo shahaadada PHD-da ee culuumta siyaasadda ka diyaariya jaamacad ku taal dalka Sudan oo aan wax ka waydiinnay xidhiidhka labada dal.
Cabdicasiis ayaa intaas raaciyey in Soomaaliya iyo Sudan ay siyaasad ahaan aad isugu dhaw yihiin ayna kuwada jiraan ururro badan "labada dalba waxay kuwada jiraan ururro caalami ah sida Qaramada Midoobay, Jaamacadda Carabta, Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD taas oo marar badan ay dhici karto in ay isaga baahdaan codad iyo taageero".
Lahaanshaha sawirka Cabdicasiis
Image caption Cabdicasiis Nuur Caabbi oo wax ka qora arrimaha dalka Sudan
"Mar haddii ay meel wax ka dhacaan waxay saamayn toos ah iyo mid dadbanba ku yeelan kartaa dadkii dalka u dhashay iyo dadkii martida ku ahaa intaba, tusaale ahaan ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta dalka sudan waxaa hakad ka galay jaamacadihii ay wax ka barayeen marka laga reebo hal jaamacad". ayuu yidhi Cabdicasiis Nuur oo aad ugu dhuun daloola arrimaha dalka Sudan.
"Runtii Sudan waa dal fac wayn, 1956-dii ayay qaadatay madax bannaanideeda, madax badan ayaana isaga dambeeyey talada dalkaas, waxaana dalkaas ka dhacay dhowr afgambi oo kala duwan, inqilaabka dalka Sudan waxaa la oran karaa dhaqan ayuu ka noqday muddo dheer ayuuna soo jiray, lama oran karo kanna waa mid ka baddalan".
"Sudan u malayn mayo in ay si sahal ah ku burburayso, waa dawlad ciidan adag leh, sida maanta muuqatana majirin wax khasaaro ah, mana rajaynayo intaasi ay dhacayso ". ayuu yidhi Cabdicasiis Nuur Caabbi.